FITRANDRAHANA ANGOVO AZO HAVAOZINA :: Hanao loa-bary an-dasy ny vondron’ireo mpandraharaha • AoRaha
FITRANDRAHANA ANGOVO AZO HAVAOZINA Hanao loa-bary an-dasy ny vondron’ireo mpandraharaha
Hametraka vahaolana. Hikaon-doha sy hanao vela- kevitra, etsy Andrefan’Ambohi- janahary, ireo mpandraharaha matihanina mikirakira ny fitrandrahana ny angovo azo havaozina. Hivelatra amina sehatra maro ny loa-bary an-dasy hotanterahin’izy ireo amin’ny alakamisy 14 sy ny faha 15 septambra 2018 ho avy izao.
“Ny tanjona amin’izany dia ny fampahafantarana an’ ireo karazana angovo azo havaozina azontsika trandrahana eto Madagasikara. Betsaka tokoa izy ireo. Isan’izany ohatra ny herin’ny masoandro izay ananantsika mandavan-taona”, hoy Rakotomalala Sahondrarison, filohan’ny Vondron’ireo mpandraharaha matihanina mpitrandraka ny angovo azo havaozina (Gprem).
Tsy hijanona eo amin’ izay fampahafantarana izay fotsiny fa hisy avy hatrany ny fanoritsoritana an’ireo tetikasa azo ampiharina eto amintsika. Nambaran’ ity mpandraharaha ity fa fototra iray hahafahana miantoka ny fampandrosoana ny firenena ny famokarana ny angovo azo havaozina. “Efa misy ny orinasa Jirama saingy hitantsika, angamba, fa tsy ampy antsika intsony ny herinaratra vokarina eto Madagasikara. Betsaka ireo angovo azo havaozina azo trandrahana hamahana an’ireo olan’ny mpanjifa”, hoy hatrany Rakotomalala Sahondrarison.
FAHABANGAN-TOERAN’NY FILOHAM-PIRENENA :: Hanohy hiantsoroka ny adidy sy andraikiny ny fianakaviamben’ny Foloalindahy
FITORIANA MOMBA NY FIFIDIANANA :: Nanaraka ny efa voalazan’ny HCC fotsiny ihany ny Filankevi-panjakana